Manao izay hialana sy mihalangalana… | NewsMada
Manao izay hialana sy mihalangalana…
« Handray ny fepetra izay tandrify azy ny fitondram-panjakana. Raha misy mihoa-pefy, na avy aiza na avy aiza izy ao amin’ny antokon-draharaham-panjakana: handray fepetra hentitra ny fitondram-panjakana momba an’izay. Mahazo matoky an’izay ny vahoaka.«
Io ny nambaran’ny filoha Rajaonarimampianina tany Mahajanga, ny 26 febroary, momba ny fandoroan’ny polisy tanàna tany kaominina Antsakabary, Befandriana Avaratra. Mby aiza? Tsy hita izay tohin’ny raharaha. Ahina ho toy ny fipoahana baomba teny Mahamasina, ny 26 jona 2016; ny Raharaha fakana an-keriny tany Toamasina…
Hatramin’izao, tsy misy resaka ny amin’ny fanadihadiana, fitsarana ireo polisim-panjakana 42 nandoro tanàna. Zary fialana ny fahalaviran’ny toerana. Hampandriana adrisa indray?
« Malahelo ny filoham-pirenena rehefa miseho ny zavatra toy ireny tany Antsakabary ireny. Misy fotoana tokony hitondran’ny rehetra ny fandaminana sy ny fandriampahalemana amin’izao fotoana izao« , hoy ny filoha tany Antsohihy, ny 14 marsa. Amin’ny zava-nitranga toy ireny, heveriny fa tsy izay hampizara na hampifanandrina no kendrena fa izay handaminana ny fiarahamonina eto amintsika.
Tsy sahy miatrika ny marina ny mpitondra? Na tsy vita ny milaza izay tohin’ny fikarohana hoe hatraiza. Karazana fialana ihany ny hoe efa eo an-tanan’ny tomponandraikitra ny raharaha? Ahina tsy mivoaka intsony toy ny mahazatra. Ahoana no atokisan’ny vahoaka ny mpitondra, raha tsy ambara aminy ny marina izay mahakasika azy mivantana?
Hatreto, tsy hita be ihany ny « Raharaha Antsakabary« . Na ny miatrika ireo vahoaka traboina any ifotony may tanàna noho ny nafitsoky ny polisim-pirenena tsy tan-dalàna aza, tsy vitan’ny fitondrana foibe. Any amin’ny 100 km ny nanaterana ny fanampiana. Lazaina fa efa nomena baiko hitatitra izany ny Tafika, nefa mbola eo hatrany ny fitarainana amin’ny fahasahiranana amin’izany.
Eo koa ny amin’ny tsy fisian’ny fanarenana sy fanonerana ny faharavana; eny, na ny fiaikena fahadisoana, ny fialan-tsiny… Hanao ahoana ny ho tohin’ny raharaha amin’izao fihetsiky ny mpitondra izao? Manao izay hialana sy mihalangalana…